Xukuumada oo aan codka loo qaadin
10 Nov 10, 2012 - 5:45:35 AM
Xukuumada Somalia ayaa ka baaqatay maanta 10 November,2012 inay hortagto Baarlamaanka si codka Kalsoonida loogu qaado, iyadoo baaqashadan lagu sheegay inay ku timid arimo dhanka farsamada ah.
Gudoonka Baarlamaanka ayaa sheegay in kulankii xukuumada codka loogu qaadi lahaa uu baaqday iyadoo xildhibaano fara badan ay isku diyaariyeen maanta inay codka u qaadaan xukuumada Somalia.
Xildhibaano ka tisran Baarlamaanka ayaa Khamiistii lasoo dhaafay u gudbiyay Gudoomiyaha Baarlamaanka Qoraal ay ku dalbanayaan inaan xukuumada la ansixin inta laga soo dhameystirayo, iyadoo aan la ogeyn in baaqashadan ay taas xiriir la leedahay iyo in kale.
"Maanta waxaa lagu waday in kulanka Baarlamaanka codka kalsoonida loogu qaado Xukuumada Cusub, balse dib u dhac ayaa ku yimid, waxaana dib u dhacaas lagu sheegay mid farsamo" ayuu yiri Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka oo GO la hadlay.
Lama sheegin xiliga xukuumada cusub la horgeynayo Baarlamaanka si ay halkaas uga jeediso barnaamijkeeda siyaasadeed kadibna codka kalsoonida loogu qaado, balse warar hoose ayaa waxay sheegayaan inay jiraan kala aragti duwanaan ku saabsan ansixinta xukuumada oo u dhexeysa Madaxda DF.
Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa waxay maanta ka doodeen Qodobada Xeer Hoosaadka, iyadoo markii kulanka la xirayay la sheegay in la isku yimaado Berri oo Axad ah, balse lama sheegin in Xukuumadu ay horimaanayo iyo doodaha xeer hoosaadka lasii wadi doono.
Golaha Wasiirada DF ayaa waxay ka kooban yihiin 10 wasiir oo ay ku jiraan laba haween ah, iyadoo Maanta ay Muqdisho ka dhaceen dibadbaxyo lagu taageerayo Xukuumada laguna dalbanayo in Xildhibaanadu ay kalsoonida siiyaan.
Ra'iisul Wasaaraha Somalia ayaa horay u sheegay inuu ku kalsoon yahay in codka la siin doono xukuumada uu soo dhisay; isagoo sidoo kale ku faanay inay isbedel ka dhalin doonaan dalka, wuxuuna shacabka Soomaaliyeed ka dalbaday inay gacan ku siiyaan gudashada waajibkooda shaqo.